फूलको व्यापारबाट कसरी गर्ने लाखाैँको कमाई ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
फूलको व्यापारबाट कसरी गर्ने लाखाैँको कमाई ?
१ कार्तिक २०७४, बुधबार १३:०९
हाम्रो जिवनमा फूलको महत्व ज्यादै नै छ । कुनै पनि बिशेष अवसर होस फूलको उपयोग गरिन्छ । हामी अाफ्ना प्रियजनलाई खुसी राख्नको लागि पनि फूल नै उपहारको रुपमा दिन्छाै । के तपाइले यो सोच्नु भएको छ कि फूलको बिजनेशबाट पनि कमाइ गर्न सकिन्छ भनेर ? हो फूलको बिजनेसबाट पनि काम लागतमा अधिक अाम्दानी गर्न सकिन्छ । फूलको बिजनेस गर्न त्यती लगानी पनि पर्दैन ।
कसरी गर्ने शुरुवात ?
फूलको व्यापार गर्दा तपाईले पहिला सबै भन्दा ठूलो फूलको सप्लायर स्तरको मालीसंग कुरा गर्नु पर्छ । तपाइलाई यस्ता व्यापारीबाट राम्रो फूल प्राप्त हुन्छ । यसका लागि त्यो स्थानको कुरा गर्नुस जुन स्थानमा तपाई अाफ्नो व्यापारको शुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ ।
यसरी गर्नुस स्थानको चयन
फूलको व्यापार गर्न स्थानको अतिअावश्यक हुन्छ । यो व्यापार तपाइ घरबाट शुरुवात गर्न सक्नु हुन्छ । तर कम समयमा नै अधिक लाभ लिने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने व्यापारलाई घर बाहिरबाट नै शुरु गर्नुस । धार्मिक स्थलको बाहिर फूलको व्यापार अधिक हुन्छ । तपाइको चहाना भए यो व्यापार सहरको कुनै पनि स्थानमा गर्न सक्नु हुन्छ ।
व्यापार गर्ने तरिका
तपाइ रंगिबिरंगी फूललाई मिलाएर गुच्छा बनाउन जान्नु हुन्छ भने अरु व्यापर पनि गर्न सक्नु हुन्छ । यसका लागि फूललाई बाध्ने कला सिक्न अावश्यक छ । तपाइले फूलबाध्न जति राम्रो कला दिन सक्नु हुन्छ दाम पनि त्यही हिसाबले राख्न सक्नु हुन्छ । तपाइले फूलको व्यापार दिनको हिसाबले पनि गर्न सक्नु हुन्छ । जस्तो शनिबार, सोमबार , शुक्रबार फूल बढी सरल तरिकाले बिक्न सक्छ । र अन्य चाडपर्वको अवसरमा पनि त्यही अनुसार बेच्न सकिन्छ । यस्तै बेला बेलामा बिभिन्न साइजका माला उनेर पनि फूलको व्यापार गर्न सकिन्छ ।
यसरी गर्नुस मार्केटिङ
तपाई फूलको व्यापार मन्दिरको बाहिर पसल राखेर ,बुके स्टल बनाएर , ,फुटपाथ वा तरकारी बजार अादी स्थानमा सहजै गर्न सक्नु हुन्छ । यस्तै अहिले प्रविधीको प्रयोग गरेर फुलको व्यापार गर्न पनि सकिन्छ । त्यस्तै अडर अनुसार ग्राहकको चहानालाई ध्यानमा राखेर पनि फूलको बिजनेस मार्कैटिङ गर्न सक्नु हुन्छ ।
प्रकाशित : १ कार्तिक २०७४, बुधबार १३:०९